Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain Oo U Dagaallamaya David Alaba
HomeHoryaalka GermalkaLiverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain oo u dagaallamaya David Alaba
November 20, 2020 Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay labo jibaartay dagaal seddex geesood ah oo ay kula jirto Real Madrid iyo Paris Saint-Germain oo ku aadan saxiixa daafaca Bayern Munich David Alaba .
28 jirkaan qandaraaskiisa haatan ee Allianz Arena ayaa dhacaya xagaaga soo socda, taasoo la micno ah in sida ay haatan tahay uu xor u noqon doono inuu kala hadlo heshiis hordhac ah koox ajnabi ah bisha Janaayo.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Austria ayaa weli udub dhexaad u ah kooxda seddexleyda ku guuleysatay, isagoo saftay 10 kulan tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, laakiin waqtiga daafaca ee Jarmalka ayaa soo dhamaan kara.
Sida laga soo xigtay Marca , Madrid ayaa si xoogan u ugaarsaneysa Alaba, laakiin Liverpool iyo PSG ayaa isku diyaarinaya inay kula dagaallamaan kooxda reer Spain saxiixa Austrian.
Ninka sagaalka jeer ku guuleystay Bundesliga ayaa 396 kulan u saftay tartamada oo dhan Bayern, kaasoo dhameystiray seddexleydiisii ​​xilli ciyaareedkii hore isagoo kula guuleystay Champions League.
Alaba ayaa loo maleynayaa inuu doorbidayo u dhaqaaqista La Liga ee Premier League.